ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကင်မရာများနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှု OMG Solutions
အမေရိကန်ကိုကျော်ရဲကိုသူတို့ကိုးကွယ်သောနေထိုင်သူများအားဖြင့်ဂရုတစိုကျလေ့လာတွေ့ရှိလျက်ရှိသည်အခါ, မြောက်မြားစွာရုံးများယေဘုယျရှိလူများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံရန်ဝတ်ဆင်ကင်မရာများကျက်နေကြသည်။ တူညီသောလက်ပတ်နာရီပေါ်မှာ Chronicle ကွိယုံကြည်စိတ်ချခဲ့သောရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကပဲရဲတပ်ဖွဲ့နေထိုင်သူများပြုမူဆက်ဆံပုံ increment ရိုးသားဖွောငျ့အဖြစ်အရာရှိများဆန့်ကျင် viciousness debilitate ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ က may ကဲ့သို့ဖြစ်ရ, တစ်ဦးအစီရင်ခံစာဥပဒလိုအပ်ချက်ရုံးကင်မရာများနှင့်သူတို့စုဆောင်းထားတဲ့မှတ်တမ်းတင်၏အသုံးချရည်မှတ်ပွင့်လင်းအသိပေးကြသည်မည်မျှလက်ရှိတပတ်လိပ်စာများများအတွက်ဆေးရုံကဆင်း။
ပြည်တွင်းစစ်နှင့်လူ့အခွင့်အရေးအပေါ်ခေါင်းဆောင်မှုညီလာခံကနေလတ်တလောခန္ဓာကိုယ်-အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာ scorecard, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ချဉ်းကပ်အကြံပေးခြင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုက Upturn အတူလုပ်ကိုင်, 50 အမေရိကန်ရဲများကရုံးများကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်နှင့်စာမေးပွဲရဲ့ရှစ်စံ၏ကြီးမားသောအဘို့အတွက်ဖြားနာသူတို့ကိုတင်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားချမှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုလျစ်ရဲတပ်ဖွဲ့မသက်ဆိုင်အရာရှိများ, ၎င်းတို့၏အစီရင်ခံစာများမှတ်တမ်းတင်မတိုင်မီရုပ်ရှင် audit ခွင့်နေကြတယ်ဆိုတာကိုအတိုင်းအတာမှတ်တမ်းတင်ကျင်းပလျက်ရှိသည်ရန်နှင့်ပုံမှန်ရှေးရှေးသူတို့တက်ပြသသောရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ရှိမရှိရှိမရှိ၏ထိုသူတို့စံချိန်များ၏ကာကွယ်မှုလုံခြုံမှုကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းထည့်သွင်း။ အမျိုးမျိုးသောလူမှုရေးတန်းတူရေးအသင်းအဖွဲ့များ, လုံခြုံရေးမြှင့နှင့်သတင်းရင်းမြစ်များရုံးဆန်းသစ်တီထွင်မှု execute နှင့်အသုံးချပုံကို impact မှမေလ 2015 အတွက်စံနှုန်းများကိုတက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
သင်းဖွဲ့အဘယ်သူအားမျှအားလုံးအတန်းထဲတွင်တစ်ဦးသွားတာတန်းရတယ်။ အမှန်တရားပဲ 13 Wade Henderson, အဆိုပါခေါင်းဆောင်မှုညီလာခံသည် NAACP နှင့် ACLU အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအသင်းအဖွဲ့များမှပြောဆိုရန် 1950 အတွက်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြစုဆောင်းတဲ့လူမှုရေးလွတ်လပ်ခွင့်ထီး၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူနှုန်းအဖြစ်မျိုးစုံဇုန်အတွက် Marshal လွန်ပြောသည်လိမ့်မည်။ ဖာဂူဆန်, Mo. နှင့် Fresno, ကာလီဖိုးနီးယားရဲရုံးများ။ သမျှသောစကားတို့ကိုစံမဆိုဖြည့်ဆည်းဖို့လျစ်လျူရှု။ ရဲတပ်ဖွဲ့ရှိသေစေလောက်ဥပဒခွင့်ပြုချက်လူနည်းစုဆကျဆံသောထုံးစံကျော်လူမြိုးတစျမြိုးဆွေးနွေးငြင်းခုံဖြတ်ပြီးချက်ချင်းလက်နက်မဲ့အာဖရိကန်အမေရိကန်လူငယ်မိုက်ကယ်ဘရောင်းပစ်ခတ်တဲ့အခါမှာဖာဂူဆန်မတိုင်မီနှစ်နှစ်ကမ္ဘာ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆွဲငင်။
မြို့ပြလူ့အခွင့်အရေးအုပ်စုများကမျက်နှာ-အသိအမှတ်ပြုစွမ်းရည်နှင့်အတူ biometric programming ကိုကင်မရာကရုပ်ရှင်ထဲတွင်တစ်ဦးချင်းစီခွဲခြားရန်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်, နှင့် scorecard ရဲ့အဋ္ဌမအချက်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာကင်မရာသူတို့ biometric အသုံးပြုမှုအပေါ်ရမှတ်ကိုချိုးဖောက်ဘို့ပဌနာခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်ချဉ်းကပ်သော။ ဒါ့အပြင်စိုးရိမ်နေကြပါတယ် ကင်မရာကိုအပေါ်လူတွေချက်ချင်းရိပ်မိဖို့မျှော်လင့်ထားသည့်အဆိုပါဆန်းသစ်တီထွင်မှုအင်အား, တွက်ချက်မှုများနှင့်သေးတည်ရှိ-သို့သော်မဟုတျကွောငျး Taser နိုင်ငံတကာနှင့်အခြားခန္ဓာကိုယ်-ကင်မရာဖန်တီးသူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-ဖိတ်စွမ်းရည်ကြီးထွားအဖြစ်လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ်ကင်မရာဘက်ထရီသက်တမ်းကိုင်တွယ်တဲ့ရောစပ်လိုအပ်သည်။ ယခုတည်ရှိ၏အဖြစ်ကိုပယ်ပုံပို, မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုဘာလဲ။
မြို့ပြလူ့အခွင့်အရေးအုပ်စုများကရဲကိုလူနည်းစုရပ်ကွက်ကြည့်နေစဉ်လေ့လာရေးဂီယာရှင်းလင်းရေးအဖြစ်ကင်မရာများအသုံးချပါလိမ့်မယ်ကြောက်, Henderson အများပြည်သူအင်တာဗျူးမှာကဆိုသည်။ အနည်းငယ်ရုံးများမျက်နှာ-အသိအမှတ်ပြုဆန်းသစ်တီထွင်မှု-ရှေ့မှာလက်လှမ်းတက်ခငျြးကဖိတ်ကျပ်မှလမ်းညွှန်ချက်များအတင်းအကျပ်အားဖြင့်ဤအစိုးရိမ်ရန်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Baltimore ရဲဌာနအဘယ်သူ၏မဟာဗျူဟာယခုအဖြစ်ရုပ်ရှင်၏ biometric ရှာဖွေမှုများကိုနှိုးဆော်ခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကရဲ့ပွဲဦးထွက်ခေါင်းဆောင်မှုညီလာခံ scorecard အတွက်ပဲတစျခုဖွစျသညျ။ အဆိုပါကွန်ဖရင့်လတ်တလော scorecard Baltimore ကောင်တီ, ဘော်စတွန်, စင်စင်နာတီ, Montgomery ကောင်တီ, Md ။ , နှင့်က Parker, Colo အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြ။ , အရမ်းအားလုံးအပိုဆောင်း biometric ကန့်သတ်ရှိသည်။
"biometric ၏အသုံးချအဓိကပြဿနာ-မအလွန်အကျွံဝေးအနာဂတ်ချွတ်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟုဂျိမ်းစ် Coldren ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသုတေသနများအတွက် CNA Institute မှတစ်ဦးမဟုတ်-များအတွက်အကျိုးအမြတ်သုတေသနနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးအသင်းအဖွဲ့မှာရှယ်ယာအစီအစဉ်များအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ကြီးကြပ်ဆိုပါတယ်။ "ဒါဟာတခြားဘာပဲဆင်တူပါသည်။ ကထိန်းချုပ်ထားသို့မဟုတ်ခြစ်မပါလျှင် biometric ပြဿနာများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။ "Coldren နဲ့ William Sousa, Nevada Las Vegas မှတက္ကသိုလ်ရာဇဝတ်မှုနှင့်တရားမ္တွပေါ်လစီများအတွက်စင်တာအကြီးအကဲ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမောင်းနှင်နေကြသည် Las Vegas မှမြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဦးစီးဌာနရဲ့ခန္ဓာကိုယ်-ဝတ်ဆင်ကင်မရာစမ်းသပ်ပြေးပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာသေးအချို့သောအခြေခံအဆီးအတားအပြီး, ရဲရုံးများခန္ဓာကိုယ်-အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေဖိတ်ခေါ်နေကြသည်, ထိုသူတို့ရဲ့တူးဖော်ရေးမှတဆင့်တွေ့ရှိခဲ့ပြီခေါင်းဆောင်မှုညီလာခံလေ့လာမှုနှင့်အတူစေ့စပ်မခံခဲ့ရပါ။ "[Las Vegas မှခုနှစ်တွင်] ကဌာနခွဲအဆိုပါအသံသွင်းပုထိုက်များအတွက်ရိုးသားကြောက်မက်ဘွယ်သောအဘို့အအသုံးဝင်သောဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ" Coldren ကပြောပါတယ်။
မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအပေါ်ဘာသို့ရာတွင်ကွဲပြားခြားနားသောကိစ္စများ biometric ထက်ပိုဆှဲဖြစ်ကြသည်မိုက်ကယ်ဖြူ, တရားရေးအမေရိကန်ဌာနခွဲ (DoJ) အတွက်ခန္ဓာကိုယ်-အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သူအရီဇိုးနားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ criminology တစ်ဦးဆရာမကပြောပါတယ်။ "ငါသည်အလားအလာ [biometric ၏အသုံးပြုမှု] အကြောင်းကိုအချို့သောဆွေးနွေးမှုစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီသေးငါပစ္စုပ္ပန်အချိန်တွင်ကြောင်းလမ်းကြောင်းဆီသို့လျှင်မြန်စွာရွေ့လျားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးမသိရပါဘူး။ " ဟုအဆိုပါခေါင်းဆောင်မှုညီလာခံန်းကျင်စင်တာသောစံ၏အခါအရာရှိများစံချိန်အရှိဆုံးကြီးမားပါဝင်သည် ဘယ်လိုဘာသာရပ်များ '' ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအထူးသဖြင့်အမှားအမြတ်ထုတ်ကလူ၏ secure ။ အချို့ရုံးများကသူတို့မှတ်တမ်းတင်ဘို့ YouTube ချန်နယ်စေကဲ့သို့သောလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများပေါ်ထွက်ပါပြီ။
ကင်မရာ၏ရန်ပုံငွေနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ:
မြောက်မြားစွာကွဲပြားမှုဟာဆန်းသစ်တီထွင်မှုအသုံးချဖို့ရန်အတားအဆီးအဖြစ်ကုန်ကျရည်ညွှန်း။ အဆိုပါကင်မရာများသူတို့ကိုယ်သူတို့တဖြည်းဖြည်းအချိန်အတန်ကြာပြီးနောက်တစ်လဗီဒီယိုကိုသိုလှောင်ဖို့တစ်လသုံးစွဲဒေါ်လာကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ကိုနှင့်အတူတရားဝင်နှုန်း $ 300 မှ $ 800 ကနေကုန်ကျစရိတ်အတွက်တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းကိရိယာများ, သိုလှောင်ရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ: အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်ဘာမှပေမယ့်သိရှိနိုင်ရန်ခက်ခဲသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေဥပမာ, ဒါကြောင့်, White ကပြောပါတယ်, အဘယ်သူ၏ကင်မရာစီမံကိန်းများကိုဥပဒခွင့်ပြုချက်ရုံးများတစ်ခုဌန်လေ့နှင့်ကူညီပေးသည်တဲ့အုပ်စုတစ်စု၏ Co-အလုပ်အမှုဆောင်အကဲဖြတ်ဖို့အားလုံးကိုရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်ဖြစ်, တောင်းဆိုမှုများဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း petulant ကွန်ယက်ကိုဆက်ဆံရေးလျော့နည်းသွား အဆိုပါ DoJ ရဲ့တရားမျှတရေးကူညီစောင့်ရှောက်ရေး၏ဗျူရို (BJA) ရှေ့ပြေးအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ကငွေကြေးထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်။ သို့သော် White ကကုန်ကျစရိတ်၏တစ်ဦးသောအဘို့ကို counterbalanced ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ကောင်းထင်၏။ "တချို့ကြီးမားရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးတွေပုံမှန်ဘုံအမှု၌နှစ်စဉ် $ 10 ကိုအနည်းဆုံးသန်းထုတ်ပေးဆောင်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ခန္ဓာကိုယ်-အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေကြောင့်ကိန်းဂဏန်းလျော့သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်တစ်ဦးကြီးမားတဲ့အပြုသဘောဖြစ်၏။ "
အဆိုပါ BJA ဌာနဆိုင်ရာကင်မရာအကဲဖြတ်ရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် scorecard အသုံးချသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများ actuate နှင့်မည်သို့လုံလုံခြုံခြုံရုံး PC များရန်မှတ်တမ်းတင်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်သည့်အခါအရာရှိများအပေါ်ပြောသည်ရှိမရှိအပါအဝင် subsidizing တာဝန် 17 စံ, အသုံးချဖို့ချဉ်းကပ်။ ခိုင်လုံသောမျှတမှုဤအစီအစဉ်များထိုကဲ့သို့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးလက်ခံကြသည်ရှိပါသည်: အဆိုပါ BJA ကိုတရားဝင်ဝတ်ဆင်ကင်မရာမူဘောင်ဝယ်ယူရန်တစ်နိုင်ငံလုံးရုံးတွေ 19 ကျော် $ 73 သန်းထွက် dished သိရသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများကိုနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေး နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: စက်တင်ဘာလ 26th, 2019 by admin ရဲ့
2740 စုစုပေါင်း Views စာ6Views စာယနေ့တွင်
ကို Message *
စင်္ကာပူ + 65 8333 4466
နာရီဟာစုံစမ်းရေးကော်မရှင် Form ကိုဖြည့် & ကျနော်တို့2အတွင်းပြန်သင်ရဦးမည်
စင်ကာပူထိပ်တန်း 500 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ 2018 & 2019
4G Live Stream ကင်မရာ
↳ BWC095-WF - WIFI ဂျီပီအက်စ်တိုက်ရိုက်လွှင့်သည့်ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာ (ဖယ်ထုတ်နိုင်သောဘက်ထရီ)
↳ BWC073-4GFR - OMG ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာ - လေယာဉ်လုံခြုံရေး ၀ န်ထမ်းများအတွက်မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုပုံစံဖြင့် 4G Live Stream
↳ BWC065 - သံခမောက်လုံးကင်မရာ 4G WIFI ကင်မရာ Head Safety Camera
↳ BWC058-4G - မျက်နှာမှတ်မိနိုင်သောခန္ဓာကိုယ်သေးသေးလေးပါ ၀ င်သည့်ကင်မရာ (WIFI / GPS / 3G / 4G)
↳ BWC011 - OMG WIFI / GPS / 4G ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်ဆင်ရသောကင်မရာ (ဘလဲဘက်ထရီ)
↳ BWC009 - WIFI / 4G / GPS ရှေ့မီးသံခမောက်လုံး
↳ OMG 4G ကြိုးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာ (BWC004-4G)
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - Body Worn Camera
↳ BWA015 - သံခမောက်လုံး ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာကိုင်ဆောင်သူ
↳ BWA011-DS01 - ၁၀ ဆိပ်ကမ်းဆိုက်ကပ်ဘူတာ
↳ BWA008-TS - ခန္ဓာကိုယ်ကင်ခြေညှပ်စင်
↳ BWA005-MP - ခန္ဓာကိုယ်ကင်သံလိုက်ပင်
↳ BWA004-LB - OMG Body Cam Lanyard အိတ် / အိတ်
↳ BWA007-DSH - OMG ပခုံးနှစ်ကြိုးသိုင်းကြိုး
↳ BWA006-RSH - ခန္ဓာကိုယ် Cam ရောင်ပြန်ဟပ်ပခုံးကြိုးကြိုး
↳ BWA012 - ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာအင်္ကျီ
↳ BWC010-LC - ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာ Lock Lock
↳ BWA000-SH - OMG ခန္ဓာကိုယ်ကင်ပခုံးကြိုးကြိုး
↳ BWA003 - သားရေကြိုးပခုံးကြိုးလွယ်အိတ်
↳ BWA015 - OMG ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာပခုံးကြိုးသိုင်းကြိုး
↳ လုလင်ပျိုဒစ်ဂျစ်တယ်အထောက်အထားစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဝဲ [ODEMS] (BWC045)
↳ BWC002 - OMG 20 ဆိပ်ကမ်းဆိုက်ကပ်ဘူတာ
ဆောင်းပါးများ - Body Worn Camera
↳ အလုပ်သမားများကခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာများအားကန့်ကွက်ခြင်းအားအသိအမှတ်ပြုခြင်း
↳ ခန္ဓာကိုယ် - သုံးပြီးကင်မရာအပေါ်လူထုယုံကြည်ချက်
↳ နှစ်များတစ်လျှောက်ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ ယ်ယူထားသောကင်မရာနည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှု
↳ ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာများသည်ဥပဒေအုပ်ချုပ်ရေးကိုအဘယ်ကြောင့်ကူညီသနည်း။
↳ Body-Worn Cameras သုံး၍ လုံခြုံရေးအစောင့်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများ
↳ ရဲအရာရှိများ၏ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာ၏အားနည်းချက်များ
↳ ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ င်ခုံမင်ထားသောကင်မရာကိုအသုံးပြုခြင်းအခွင့်အရေး
↳ ကိုယ် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာ - ဆေးရုံများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်နည်းဗျူဟာများ
↳ ခန္ဓာကိုယ် - သုံးပြီးကင်မရာများပေါ်တွင်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု၏နိဒါန်း
↳ Body-Worn Camera မ ၀ ယ်ခင်သတိပြုရမည့်အချက်များ
↳ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ၀ န်ထမ်းများ၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန် Body ကင်မရာများ
↳ Body-Wear Camera သုံး၍ ရဲအရာရှိများ၏အားနည်းချက်များ
↳ ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်ဆင်ထားသည့်ကင်မရာရိုက်ကူးချက်များသည်အရာဝတ္ထုများအားရှင်းလင်းခြင်းမပြုနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများ
↳ ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာများကိုအသုံးချရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
↳ ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနေရာများတွင်အသုံးပြုသည်
↳ ရဲ၏ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားသောကင်မရာများသည်မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုခံရမည်ဖြစ်သည်
↳ ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာပလက်ဖောင်းကိုကာကွယ်ရန်အစိုးရမှအသုံးပြုသောလုံခြုံသောနည်းလမ်းများ
↳ ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ တ်ထားသည့်ကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံမှုအပေါ်စိုးရိမ်မှုများမြင့်တင်ခြင်း
↳ ခန္ဓာကိုယ် - အသုံးပြုသောကင်မရာအသုံးပြုမှုနည်းလမ်းများ
↳ ဆေးရုံများရှိကိုယ်ခန္ဓာ ၀ ယ်ယူထားသောကင်မရာ၏အားသာချက်များ
↳ ခန္ဓာကိုယ်မှ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာများအားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများအတွက်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုမြှင့်တင်ခြင်း
↳ မှန်ကန်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ - အသုံးပြုသောကင်မရာဆုံးဖြတ်ခြင်း
↳ ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာအတွက်ကွန်ယက်ကိုအစိုးရကကာကွယ်ရန်အစိုးရမှအသုံးပြုနိုင်သောနည်းလမ်းများ
↳ ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာနှင့်သင်ခန်းစာယူရန်အစီအစဉ်
↳ ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ င်လာသည့်ကင်မရာကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုများနှင့်လျှို့ဝှက်ခြင်း
↳ အဘယ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်-Cam ဗီဒီယိုဖိုင်မအားရှင်းလင်းရန်အရာ Up ကိုစေခြင်းငှါ,
↳ facial အသိအမှတ်ပြုရဲတပ်ဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ်-ဝတ်ဆင်ကင်မရာများကိုလာနေသည်
↳ ခန္ဓာကိုယ်-ဝတ်ဆင်ကင်မရာအစိုးရများအတွက်ကွန်ယက် Secure
↳ အကျိုးသက်ရောက်မှုရဲတပ်ဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းကင်မရာများကိုဖြစ်ပါတယ်မည်သို့ - လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ
↳ BWC094 - စျေးသက်သာလွယ်ကူသောကိုယ်ခန္ဓာ ၀ ယ်ယူထားသောကင်မရာ (ဖယ်ထုတ်နိုင်သော SD ကဒ်)
↳ BWC089 - ၁၆ နာရီကြာသောပေါ့ပါးသည့်ရဲကိုယ်ထည် ၀ တ်စုံကင်မရာ (Wide Angle 16-Degree)
↳ BWC090 - လုံခြုံရေးအစောင့်များအတွက်ရဲလေးပေါ့ပါးသည့်ရဲကိုယ်ခန္ဓာသည် (Wide Angle 170-Degree 12 Working Hrs)
↳ BWC083 - လုံခွုံရေးအစောင့်များရဲရဲရဲခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာ (ရေစိုခံ၊ အနံထောင့် ၁၃၀ ဒီဂရီ၊ ၁၂ နာရီအလုပ်ချိန်၊ 130p HD)
↳ BWC081 - Ultra Mini WIFI ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ င်လာသည့်ကင်မရာ (ဒီဂရီ ၁၄၀ + ညဘက်မြင်ကွင်း)
↳ BWC075 - OMG ကမ္ဘာ့အသေးဆုံးရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံ
↳ BWC074 - အသေးစားပေါ့ပါးသောကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်ဆင်ထားသောဗွီဒီယိုကို Super Compression ပါရှိသည် - 20GB အတွက် 25-32 နာရီ [LCD screen မရှိပါ]
↳ BWC058 - OMG Mini Body Worn ကင်မရာ - Super Video Compression - 20GB အတွက် 25GB
↳ BWC061 - OMG ရှည်လျားသောနာရီများ [၁၆ နာရီ] ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံရိုက်ကူးထားသောကင်မရာကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
↳ BWC055 - ဖယ်ရှားနိုင်သော SD Card Mini Body Worn Camera
↳ အလင်းကိုအလေးချိန် WIFI ဥပဒေစတင်အာဏာတည်ခြင်းကခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းကင်မရာ, ဗီဒီယို 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
↳ BWC041 - OMG တံဆိပ်ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာ
↳ ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံ ၀ တ်ဆင်ထားသော OMG Mini၊ 2K ဗီဒီယို (SPY195)
↳ BWC010 - ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံ၊ ၁၂၉၆p၊ ၁၇၀ ဒီဂရီ၊ ၁၂ နာရီ၊ ညအမြင်အာရုံ
↳ BWC004 - OMG အကြမ်းခံသည့်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာ
↳ BWC003 - ရဲဌာနရဲ့ရဲ့ရဲ့ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုကင်မရာ
↳ OMG ၀ တ်ဆင်နိုင်သောခလုတ်ကင်မရာ၊ Motion Activated Video Recorder (SPY045B)
↳ WIFI အိတ်ဆောင်ဝတ်ဆင်နိုင်လုံခြုံရေး 12MP ကင်မရာ, 1296P, H.264, App ကိုထိန်းချုပ်မှု (SPY084)
↳ BWC078 - OMG OTG USB Android နှင့် WIFI စမတ်ဖုန်း Mini Bullet Body Helmet Camera
↳ BWC062 - OMG ရှေ့မီးခန္ဓာကိုယ်သုံးထားသောကင်မရာ
↳ BWC076 - သူနာပြုများအတွက်ကျည်ဆံခေါင်းနှင့်တပ်ဆင်ထားသည့် OMG ရဲတပ်ဖွဲ့ကင်မရာကိုဝတ်ဆင်ထားသည်
↳ BWC072 - အပြင်ဘက်တွင်လှုပ်ရှားမှုများရေစိုခံခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်ဆင်ရသောခမောက်နားကြပ်ကင်မရာ - WIFI ရေစိုခံ
↳ ဝတ်ဆင်နားကြပ်ကခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းကင်မရာ (BWC056)
Uncategorized - ကိုယ်ခန္ဓာအသွင်အပြင်ကင်မရာ
↳ BWC071 - ကိုယ်ထည်သေးငယ်သည့်အပိုအပိုဆောင်းကင်မရာ
↳ BWC066 - သံခမောက်အတွက်ရဲခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာ Head Bullet Cam
↳ [LCD ကိုဖန်သားပြင်နှင့်အတူ] စာဝှက်စနစ် (BWC060) နဲ့ Mini ကိုခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းကင်မရာ Secure
↳ BWA012 - 10 ဆိပ်ကမ်းသင်္ဘောကျင်းများ - အထောက်အထားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
↳ Lock ကို Clip (BWA010)
↳ Mini HD ကိုယ်ခန္ဓာတပ်ဆင်ထားသည့်ရဲကင်မရာ၊ 12MP OV2710 140 ဒီဂရီကင်မရာ၊ H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, ကြာမြင့်စွာအလုပ် (BWC053)
↳ OMG Wifi Mini ဝတ်ဆင်နိုင်သောအားကစားလှုပ်ရှားမှုခမောက်ခလုတ်ကင်မရာ (BWC049)
↳ Mini ကိုသူလျှိုကင်မရာ - Hidden Pocket ကလောင်ကင်မရာ 170 ဒီဂရီ Wide Angle Lens ကို (SPY018)
↳ စျေးနှုန်းချိုသာသော 4G ခန္ဓာကိုယ်ဝတ်ဆင်ရသောကင်မရာ (BWC047)
↳ Smart မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသောခန္ဓာကိုယ်သုံးကင်မရာ (BWC042)
↳ BWC040 - စျေးနှုန်းချိုသာသော HD ကိုယ်ခန္ဓာဝတ်ဆင်ထားသောကင်မရာ
↳ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောဘက္ထရီ - ကိုယ်ခန္ဓာ ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာ (BWC037)
↳ Display နှင့်အတူ OMG 8 ဆိပ်ကမ်းများဘူတာရုံ (BWC038)
↳ ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းကင်မရာ - ဘူတာ Docking 8 ဆိပ်ကမ်း (BWC036)
↳ Body Worn Camera - 3G၊ 4G, ဝိုင်ဖိုင်၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုတိုက်ရိုက်၊ Bluetooth၊ မိုဘိုင်း APP (IOS + Android)၊ 8hrs စဉ်ဆက်မပြတ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ထိတွေ့မှုဆလိုက်ထိန်းချုပ်မှု။ (BWC035)
↳ ခန္ဓာကိုယ် Worn ကင်မရာ - Wifi Body Camera (BWC034)
↳ ကိုယ် ၀ ယ်ယူသည့်ကင်မရာ - Novatek 96650 ချစ်ပ်၊ ထည့်သွင်းထားသည့်သိုလှောင်ကဒ် (BWC033)
↳ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်ခန့်ထားသည့်ကင်မရာ - Ambarella A7LA50 chipset, 140 မျက်နှာပြင်အကျယ်၊ 128GB အမြင့်သိုလှောင်မှု၊ GPS စနစ်ပါ ၀ င်သော (BWC031)
↳ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်ခန့်ထားသည့်ကင်မရာ - Ambarella A7LA50 chipset, 140 မျက်နှာပြင်အကျယ်၊ 128GB အမြင့်သိုလှောင်မှု၊ GPS စနစ်ပါ ၀ င်သော (BWC030)
↳ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်ခန့်ထားသည့်ကင်မရာ - Ambarella A7LA50 chipset, 170 မျက်နှာပြင်အကျယ်၊ 128GB အများဆုံးသိုလှောင်မှု၊ ဖယ်ရှားနိုင်သောဘက္ထရီအမျိုးအစား (BWC028)
↳ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်ခန့်ထားသည့်ကင်မရာ - Ambarella A7LA50 chipset၊ 170 ဒီဂရီ Wide angle၊ 128GB အများဆုံးသိမ်းဆည်းခြင်း (BWC026)
↳ ကိုယ် ၀ တ်ဆင်ယင်ကင်မရာ - Novatek 96650 chipset (BWC025)
↳ ကိုယ်ထည်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်သည့်ကင်မရာ - အစားထိုးနိုင်သော 2500mAh ဘက်ထရီ (BWC024)
↳ ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းကင်မရာပြင်ပ SD ကတ် (BWC021)
↳ OMG 4G ခန္ဓာကိုယ် ၀ တ်စုံသုံးကင်မရာ (BWC012)
↳ removable ဘက်ထရီ GPS စနစ်ကခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းရဲတပ်ဖွဲ့ကင်မရာ [140deg] (BWC006)
↳ OMG 12 ဆိပ်ကမ်းများကိုယ် ၀ တ်ဆင်ထားသောကင်မရာ Docking Station (BWC001)
↳ hidden Mini ကိုသူလျှိုဗီဒီယိုကင်မရာ (SPY006)
↳ Hidden သူလျှို Pocket ကလောင်ဗီဒီယိုကင်မရာ (SPY009)
↳ button ကိုကင်မရာ (SPY031)
↳ WIFI ကလောင်ကင်မရာ DVR, P2P, အိုင်ပီ, 1080P ဗီဒီယိုအသံဖမ်း, App ကိုထိန်းချုပ်ရေး (SPY086)
↳ WIFI အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်ကလောင်, H.264,1080p Motion, ထောက်လှမ်းခြင်း, SD ကတ်မက် 128G (SPY091)
↳ ဒီဂျစ်တယ်အသံနှင့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်စက်၊ ဗီဒီယို 1080p၊ အသံ 512kbps၊ 180 Deg Rotation (SPY106)
↳ ကိုယ်ခန္ဓာအသွင်အပြင်ကင်မရာ / ဒစ်ဂျစ်တယ်အထောက်အထားစီမံခန့်ခွဲမှု (BWC008)
↳ ထိပ်တန်းစင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံကင်မရာဖြန့်ဖြူးသူ
Wide Angle View AES256 စာဝှက်စနစ်
WIFI / 4G တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ခြင်း